Pregnancy – စာမကျြနှာ3– Healthy Life Journal
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာ မိခင်က ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ဘယ်လောက်တက်ရမလဲ . . .
ဒေါက်တာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတွေ ဗဟုသုတ ရရှိစေဖို့အတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာ မိခင်အနေနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ဘယ်လောက် တက်ဖို့လိုသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်မှာ အစားအသောက်ကို ပုံမှန်စားသောက်နေတဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ဟာလည်း ပုံမှန်တက်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အာဟာရပြည့်ဝစွာနဲ့ တစ်ရက်ကို ၆ ကြိမ်ကနေ ၈ကြိမ်ကြားစားပေးနေရတဲ့အတွက်...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဗိုက်ကြောပြတ်ရာ မဖြစ်အောင်…
၊ စူး(ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊ ၁ ။ ကိုယ်ဝန်ရင့်လာချိန်မှာ အကြောပြတ်ရာ ပျောက်စေမယ့် ခရင်မ် ဒါမှမဟုတ် ဆီကို အနည်းဆုံး တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် လိမ်းပေးပါ။ ၂ ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် တတိယသုံးလပတ်မှာ အ၀တ်အစားကို သက်သောင့်သက်သာ ခပ်ပွပွဝတ်ဆင်ပါ။ အိပ်ရာခင်းကို...
ကလေးမွေးပြီး ချက်ချင်းတော့ အရင်လို ကိုယ်လုံးမျိုးပြန်ရဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လေးပတ်အတွင်း အောက်ပါနေထိုင် စားသောက်ပုံနည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာပေးရပါမယ်။ – သင့်ကိုယ်သင် အချိန်ပေးပါ တတ်နိုင်သမျှ များများအနားယူဖို့ကြိုးစားပါ။ သင့်စိတ်ခံစားချက်ကို ပုံမှန်ဖြစ်အောင်နဲ့ တည်ငြိမ်အောင်ထိန်းချုပ်ပါ။ အခုလက်ရှိကိုယ့်ဘ၀ကော မွေးကင်းစကလေးလေးကိုပါ ကျေကျေနပ်နပ်လက်ခံလိုက်ပါ။ –...
– မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) သင်က ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေရသူ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ဝန်ရှိဖို့ ပြင်ဆင်နေသူ ဒါမှမဟုတ် လောလောဆယ် လက်ထပ်ထားသူဖြစ်ရင် ကိုယ်ဝန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကြိုတင်သိထားသင့်တဲ့ အချက်တွေကို အကြံပြုပါရစေ။ (၁) သင်က ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားသူ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ဝန်မလိုချင်သေးရင် ထိရောက်တဲ့ သန္ဓေတားနည်းကိုသုံးပြီး...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် ဘ၀တွင်ကျေနပ်စွာနေတတ်စေရန် သိသင့်သော အချက် ၈ ရပ်
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ (၁) ဒေါသနဲ့ဝေးဝေးမှာနေပါ။ ဒေါသက သင့်ကိုပဲ နာကျင်ထိခိုက်စေပါတယ်။ (၂) အငြင်းပွားဖွယ်ရာ အခြေအနေတစ်ရပ်မှာ ကိုယ်ကမှန်နေရင် ဒေါသဖြစ်စရာ မလိုပါဘူး။ ကိုယ်ကမှားနေရင် သင့်မှာ ဒေါသဖြစ်ခွင့်တောင်မရှိပါဘူး။ (၃) မိသားစုအပေါ် စိတ်ရှည်တာက ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ပြသတာပဲဖြစ်ပါတယ်။...
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန် မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ရဲ့ အနေအထိုင်၊ အပြုအမူဆိုင်ရာ မှားယွင်းမှုတစ်ခုခုကြောင့် သန္ဓေသားမှာ မျက်စိထိခိုက်တတ်ပါသလား ဆရာ။ ဖြေ. ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်အနေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကင်ရတယ်ဆိုရင် ကလေးရဲ့ မျက်စိကိုထိခိုက်ဖို့ ရာနှုန်းပြည့်သေချာပါတယ်။...
မေး ။ သမီးအိမ်ထောင်သည်ပါ။ ဘာတားဆေးမှမသုံးပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃လလောက်က… ကလေးလိုချင်လို့ အိုဂျီနြဲ့ပတာ အကုန်ကောင်းပါတယ်။ သူပေးတဲ့ သံဓာတ်အားဆေးကို တစ်နေ့တစ်လုံး သောက်ပါတယ်။ အရင်လတွေက ရာသီအမြဲမှန်ပါတယ်။ အခုလရက်ကျော်နေတာ တစ်ပတ်ရှိပါပြီ။ ဒါကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့သုံးရက်က စစ်ကြည့်တာ တစ်ကြောင်းပဲ ပေါ်ပါတယ်။...
မေး ။ သမီးကအသက်၂၆နှစ်၊ အမျိုးသားလည်း ၂၆နှစ် ပါ။ သမီးက အပျိုကတည်းက ရာသီက ၂လ-၃လ၊ တစ်ခါတစ်ခါဆို ၄လတစ်ခါလောက်မှ လာတာပါ။ သမီးအမေလည်း အရင်က အဲလိုပဲ ရာသီမမှန်ဘူးတဲ့ ဆရာ။ မျိုးရိုးများ လိုက်တာလားလို့။ သမီး အခုအိမ်ထောင်ကျတာ၂နှစ်ရှိပြီဆရာ။...
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၁။ အချင်းကပ်တာ ဘာကြောင့်လဲ။ ၂။ သမီးအသက် ၃၂နှစ်ပါ။ Abortion ဖြစ်လို့ D&C လုပ်ထားပါတယ်။ လုပ်ပြီးကာစက သွေးဆင်းတာများပါတယ်။ ၆ ပတ်နဲ့ပါ။ ၂ ပါတ်လောက်ထိ သွေးမတိတ်လို့ Antibiotics one Course တိုက်ပါတယ်။...